Maxay Tahay Sababtoo Ah Codsiyada Moobaylka | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 30, 2013 Khamiis, Maarso 7, 2013 Douglas Karr
Waxaa jirtay waqti aan ahaa qof ka sheekeeya barnaamijyada moobiilka. Waxaan u maleynayay inay tahay inaan sugno illaa HTML5 iyo daalacashada moobiillada halkan iyo barnaamijyadu si fudud u baabi'i doonaan habka barnaamijka kombuyuutarka. Laakiin ma aysan helin.
Midkeenna codsiga mobile loogu talagalay by khubarada khibrada user ee Postano gabi ahaanba wuu baabi'iyay aragtidaydii hore. Waa tan tirakoobkeena wareega iyadoo la adeegsanayo Webtrends.
Hal fiiri tirakoobka codsigeena waana inay bedeshaa maskaxdaada sidoo kale. In kasta oo aan haysanno 272 isticmaale oo keliya tan iyo markii aan bilawnay, waxaan haysannaa in ka badan 15.3k shaashadood - taasi waa 14.1 aragtida shaashadda kalfadhi kasta! Oo mid kasta oo ka mid ah fadhiyadaasi waa celcelis ahaan ku dhowaad 6 daqiiqo! In kasta oo nuxurku yahay boqorka, haddana ma aha waxyaabaha si fudud u soo jiidan kara dareenka badan. Codsiga si aan caadi aheyn ayaa loo qaabeeyey - laga soo bilaabo iskudhafka qaybta ilaa iskudhafka isku dhafan iyo fiidiyowyada taabashada farta.
Waxaad ku arki kartaa dhamaadka dabada tirooyinka ee aan dhawaan karti u siinay ogeysiisyada riixista. Taasi waa hubaal inay soo saareyso fadhiyo badan isticmaale kasta. Waxaan sidoo kale wali ka shaqeyneynaa sidii loo sii wanaajin lahaa waxyaabaha ku jira. Waa inaan ku dhejino badhamada ciyaarta fiidiyowyada (koodhkii waa la qabtay, lama fuliyo) oo waxaan helnaa kafaala qaadayaasheena waxoogaa xusid ah.
Tags: suuq geynta suuq geyntaapp mobilecodsiga mobilecabirrada wareegaisticmaalayaasha mobiladaaragtida mobiladasheeko xariirwebtrends
Qoraalka maqalka iyo muuqaalka oo la fududeeyay: Speechpad